Tag: khibrad | Martech Zone
7 Istaraatijiyadaha Suuq-geynta Mawduucyada Dhiirrigeliya Kalsoonida iyo Wadaaggooyinka
Arbacada, Agoosto 3, 2016 Alex Membrillo
Mawduucyada qaar waxay u egyihiin inay sifiican uga shaqeeyaan kuwa kale, iyagoo ku guuleysta saami badan iyo beddelaad badan. Mawduucyada qaar ayaa la booqdaa oo lala wadaagaa in ka badan, iyagoo keenaya dad badan oo cusub sumaddaada. Guud ahaan, kuwani waa qaybaha ka dhaadhiciya dadka in astaantaadu leedahay waxyaabo qiimo leh oo la sheego iyo fariimo ay jeclaan lahaayeen inay la wadaagaan. Sideed u kobcin kartaa joogitaanka khadka tooska ah ee internetka oo ka tarjumaya qiyamka guuleysta kalsoonida macaamiisha? Xusuusnow tilmaamahan markaad
Ma jiro toddobaad soconaya Martech Zone in aynaan daaweyneynin oo aan la wadaageyno xaqiiqooyinka dadka kale, ra'yigooda, xigashooyinka, iyo xitaa waxyaabaha ay ka kooban yihiin iyadoo loo marayo qaab qoraal ah iyo daabacado kale. Annagu ma nihin goob wax lagu qoro oo loogu talagalay waxyaabaha dadka kale ka kooban, in kastoo. La wadaagida fikradaha dadka kale kaaama dhigeyso maamul, waxay aqoonsan tahay oo xoojineysaa awooda qoraaga. Laakiin… kor u qaadista, ka faallaynta, dhaleecaynta, tusaalaynta iyo si fiican u sharraxidda waxyaabaha dadka kale ka kooban tahay ma aha oo keliya aqoonsi iyo xoojin
Xaqiiqdii, Runtii, Runtii Waxaan Rabaa Inaan Adeegsado Madalkiina… Laakiin…
Isniin, Maarso 14, 2016 Isniin, Maarso 14, 2016 Douglas Karr
Toddobaadkan, iibiye ka socda gogol ballaadhan ayaa i qabtay. Waxaan xiriir dhow iyo xiriirba la leenahay shirkadda dhowr sano hadda. Waxaan arkay dembiyo ku saabsan sida loo adeegsado barnaamijyadooda; Waxay heleen is-dhexgal farsamo fudud oo fudud, iyo tan awoodo is-dhexgal. Waxay umuuqataa madal rajo leh. Waxaan dooneynaa inaan kor u qaadno soo degsashada barnaamijkeena moobiilka tan iyo markii Bluebridge ay shaqo aad u fiican ka qabatay moobilkeena
Waa tan sida aad ugu abuuri karto hoggaamiyeyaal badan baraha bulshada
Talaado, Agoosto 26, 2014 Sabtida, Maarso 5, 2016 Douglas Karr
Kaliya waxaan la kulmay milkiile ganacsi waxaanan ku sifeynayay qaabka cajiibka ah ee baraha bulshada kaliya aysan ganacsi ugu kaxeyn shirkadeyda, laakiin sidoo kale macaamiisheena Waxay umuuqataa rajo xumo socota sida ay ula taagan tahay baraha bulshada waxayna saameyn ku leedahay jiilka hogaaminaya waxaan aaminsanahay inay u baahan tahay in la saxo. Inta badan arrimaha ku saabsan warbaahinta bulshada iyo jiilka hoggaanka wax shaqo kuma laha natiijooyinka dhabta ah,